MLM raharaham-barotra amin'ny aterineto
Fihetsiketsehana goavam-be tamin'ireo taona faha-90 dia nanamafy tanteraka ny fihetsika ratsy amin'ny tambajotra ao amin'ny tambajotra sosialy . Maro no nanandrana nanao fampiroboroboana marobe (varotra anglisy, MLM), nahatsiaro ny endriky ny "tsia" marobe ary ny hazakazaka lava hitady mpanjifa vaovao. Misy olona misafotofoto ny raharahan'ny MLM miaraka amin'ny filamatry ny piramida ara-bola, ary ny olona iray dia reraky ny mihazakazaka haavo, mametraka ny vokatrao. Na izany aza, fitaovana tahaka ny aterineto no manokatra fahafahana vaovao ho anao hananganana tamba-tserasera sy fampiroboroboana marobe maromaro. Mino ny manam-pahaizana fa ao ambadiky ny fampiroboroboana ny varotra MLM amin'ny alalan'ny Internet - ny hoavin'ny fivarotana varotra.
Ny tsiambaraton'ny fahombiazan'ny MLM eo amin'ny Internet
Ny zava-misy dia nanjary fitaovana vaovao sy fototra ho an'ny mlml business dia tena voajanahary, satria ny marketing ara-barotra dia tsy inona fa ny fifandraisana ara-barotra. Ary ny Internet dia, raha ny marina, fahafahana tsy misy farany hahita mpanjifa vaovao. Ny lehibe indrindra dia ny fahafahanao mikaroka ireo olona liana amin'ny fiaraha-miasa, ary tsy manao zavatra tsy misy dikany, toy ny tamin'ny Internet teo aloha ary ny fahafaha-manao ho lasa fitaovana vaovao amin'ny orinasa MLM. Ankehitriny, mihamaro hatrany ny olona mangataka fampahalalana momba ny varotra tambajotra ary manomboka ny orinasam-pikarohany amin'ny milina fikarohana. Ny fanontaniana "ny fomba hampivoarana ny tetikasa MLM amin'ny Internet" dia hitranga hatrany. Amin'ny alalan'ny fomba fanao mahomby dia hitady ny mpanjifa anao!
Amin'ny alàlan'ny Internet, dia azo atao ny dingana rehetra momba ny varotra MLM: fikarohana sy fanasana mpiara-miasa, fiofanana, mamorona mpitarika, mahafantatra ny vokatra ary mivarotra mivantana. Izany rehetra izany dia miresaka momba ny safidin'ny tambajotra manerantany.
Ny fitsipika momba ny famoronana asa vaovao MLM ao amin'ny Internet
Rehefa mamorona tamba-jotra dia aza miezaka mifandray akaiky amin'ny mpandray anjara tsirairay (indrindra raha tsy maneho fiheverana mahaliana amin'ny fiaraha-miasa izy ireo). Mila mampiofana mpitarika vitsivitsy sy mifehy (amin'ny endrika fampitaovana mavitrika) fotsiny ianao. Ny fifandraisana amin'ny mpitarika 5-7 dia tena misy tokoa, ary amin'ny alàlan'ny aterineto indray, dia mora indrindra ny manao.
Tena zava-dehibe tokoa ny tsy famaritana ny entana, fa mba hanamboarana drafitra raharaham-barotra mazava ho an'ny orinasa MLM vaovao. Mila mieritreritra amin'ny alalan'ny foto-kevitra ianao, manomboa ny loza mety hitranga voalohany, eritrereto amin'ny alalan'ny rafitra hafa mba hampianarana mpitarika sy hampiroboroboana ny vokatrao. Avy amin'ny fomba mazava ny mamolavolanao asa fanampiny, miankina amin'izay, na ho hitanao ireo mpanjifanao voalohany.
Mazava ho azy, afaka ho tonga mpiasa amin'ny orinasa iray efa noforonina ianao. Na ahoana na ahoana, raha asaina mandray anjara amin'ny fivarotana marobe ianao dia araho ny fitsipika tsotra:
Vakio amim-pitandremana ny fampahalalana nomena anao avy amin'ireo mpivarotra tamba-jotra;
jereo ny vaovao momba ny orinasa sy ny vokatra (fanamarinana, fanavaozana mpanjifa);
Diniho raha mety tsara ny rafitra fanofanana;
Ataovy azo antoka fa manamafy ny fanamafisana ny drafitry ny vola.
Ary, farafaharatsiny, andeha hojerentsika ny fomba hahazoana tombontsoa amin'ny mpanjifa. Ohatra, ianao dia hivarotra raki-peo miaraka amin'ny tazomoka mahaliana amin'ny tarehinao. Ny fihetsikao:
mamorona mailaka miaraka amin'ny lohateny fakam-panahy izay manintona ny mpihaino kinendry;
Rehefa afaka mivezivezy amin'ny vohikalanao amin'ny alalan'ny rohy iray mifandraika aminy ny mpanjifa dia afaka mahafantatra ny vokatra maimaim-poana ("ny fandoavam-bola" ho azy io angamba ny fepetra fametrahana rohy mankany amin'ny tranokalanao ao amin'ny tambajotra sosialy);
Ny fividianana ny rohy ilaina, fa tsy ny fampahafantarana feno, ny mpividy dia manam-potoana hamolavola hevitra momba ny vokatrao ary mety maniry ny hividianana rakitra voarakotra miaraka amin'ny rakitra;
Rehefa manintona mpanjifa vaovao izy dia mahazo bonus sy fihenam-bidy, ankoatra izany, afaka manofana mpitarika afaka hitarika tranonkala sy toro-hevitra momba ny fivarotana ny vokatrao ianao.
Aza matahotra hampiasa ny traikefan'ireo mpifaninana aminao, ny Internet dia toerana izay tsy ahafantarana ny sehatra ho an'ny varotra tsy misy fetra!
Ny fiatoana asa vehivavy be indrindra indrindra
Hazo hazo avy amin'ny kofehy
Ny jiron'ny taona vaovao eo am-baravarankely
Fiovan'ny lahy sy vavy
Ny hatsaran'ny vehivavy amin'ny ririnina 2015-2016
Tetezana fizarana ho an'ny efitrano
Mandehàna tongotra matevina
Ahoana no hikarakarana gloxinia?
Aza manomboka ny sambo mpitatitra
Ny lakozia an-jorony dia apetraka amin'ny lakozia kely
Koumiss - toetra mahasoa
Vareniki ao amin'ny multivariate